Isamsung yazisa ngoguqulelo lwe-SIM-mbini ye-Galaxy Qaphela 8 eYurophu | I-Androidsis
Ulwazi kwiphepha lokuxhasa i-Samsung web portal iphakamisa ukuba inkampani iya kuphehlelela eYurophu inguqulelo ye-SIM ezimbini zeGalaxy Note 8, Imodeli yayo eya kuchongwa kunye nekhowudi I-SM-N950F / DS. Nangona kunjalo, iindaba ezimbi kukuba le modeli izakubonisa Itreyi yomxube, ukuze abasebenzisi kuya kufuneka bancame ukusebenzisa i-microSD kwiindleko zokusebenzisa iSIM yesibini.
Ngethamsanqa, okwangoku kukholelwa ukuba i-Galaxy Note 8 iza kufika inememori yangaphakathi ukuya kuthi ga kwi-256GB kweminye imimandla, ukuze ukusetyenziswa kwememori khadi eyongezelelweyo kungafuneki. Kodwa ukuba ufumanisa ukuba unendawo encinci kwisixhobo sakho, zininzi kakhulu iiplatifomu zokugcina ilifu, okanye simahla, njengeDropbox, Google Drayivu okanye UDegoo, inkonzo esele siyichazile kutshanje kwaye oko kuyanikezela I-100GB yendawo yamafu yasimahla.
Ngokwokuvuza okutsha, iGlass Note 8 izakufika nge I-6.3-intshi ye-infinity Display, iprosesa ISpapdragon 835 / Exynos 8895, I-6GB ye-RAM kunye nebhetri ye-3.300 mAh. Iya kuba nayo inkqubo yokusebenza kwe-Android 7.1.1 Nougat ngaphandle kwebhokisi, nangona ngokuqinisekileyo iya kuhlaziywa kwi-Android O kwiinyanga ezimbalwa okanye nakwiiveki, njengoko uGoogle azakwazisa kule nyanga. Inguqulelo ye-Android 8.0 yeGoogle Pixel kunye neNexus.
Ngokubhekisele kumaxabiso, kutshanje kutyhilwe ukuba I-Galaxy Note 8 iya kuba yeyona nto ibiza kakhulu kwi-Samsung ukuza kuthi ga ngoku, Ngexabiso elimalunga ne-1000 euro eYurophu.
I-Samsung Galaxy Note 8 iya kuziswa ngexesha lomsitho ocwangciselwe u-Agasti 23 olandelayo, usuku apho sinokubona nokufika kwe I-Gear Fit 2 Pro, isixhobo sesithathu sokuqina komzimba, esiya kuzisa ukonyuka kwamanzi kunye nenkxaso yokudlala umculo weSpotify ngaphandle kweintanethi, kunye nesixhobo esinyani seGearVR.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Isamsung yazisa ngoguqulelo lwe-SIM-mbini ye-Galaxy Note 8 eYurophu
Imidlalo kunye nokusetyenziswa ukonwabela iholide